Uyikhetha njani iphalethi yombala efanelekileyo yohlobo lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa siyila uphawu lophawu olubonakalayo, enye yezinto zokuqala ekufuneka sizichaze yile Iphalethi yombala. Umdibaniso we logo + yemibala luphawu lophawu lwakho, oluya kwenza ukuba umthengi akubone njengoko uzibeka kwindawo yentengiso.
Kodwa, akusoloko kulula ukufumana umbala wombala ofanelekileyo. Nokuba sichaza ubuni bethu njengabaqambi, sinokuzifumana silahlekile embindini wendlela. Ndiyathetha, siqinisekile sinoluvo oluthile lokuba yeyiphi imibala ephambili enokusisebenzela, kodwa Iphalethi epheleleyo ayisiwo umbala ophambili we logo yakho, Sino yonke imibala ehamba nayo kwaye iya kusetyenziswa kwiimveliso zakho, Ukupakisha, iwebhusayithi, iinethiwekhi zentlalo, njl.
Kwenzeka into efanayo xa sisebenzela umthengi, unokuba nombala othile engqondweni, kodwa ezinye zisalele ukuba sizichaze. Kuya kufuneka sifumane olona manyano lubalaseleyo elingana ubuntu bebrand yakho.
1 Mingaphi imibala ekufuneka iphalethi ibe nayo?
2 Ungazikhetha njani?
3 Adobe Color
Mingaphi imibala ekufuneka iphalethi ibe nayo?
Ngokwesiqhelo isazisi somzobo wegama kufuneka sinalo Imibala emi-4 ukuya kwemi-5 kwiphalethi. Ababini okanye abathathu kubo ngabona baphambili, Eminye iya kuba yimibala encedisayo okanye edibanisa neyokuqala.
Ukuba, umzekelo, usebenzisa iphalethi yombala kwiphepha lakho lewebhu, amagama amacandelo anokuhamba kwimibala yakho emibini ephambili: Malunga nam, iiMveliso, iiNkonzo, uNxibelelwano, njl., Ngelixa amaqhosha aqhagamshela kwinethiwekhi yakho Kwicandelo loNxibelelwano, banokuhamba ngemibala ehambelana. Koko kukuthi, ngokokubaluleka komxholo, imibala iya kusetyenziswa.
Iphalethi yombala yokwenza uphawu
Indlela elungileyo yokukhetha imibala yeyokuqala khetha amagama aphambili achaza uphawu lwakho. Ngaba ungayenza ukuqiqa nazo zonke eziza engqondweni, kwaye kwezi uya kuhlala kuphela kwezona zibalulekileyo. Amagama ama-5-10 alungile.
Ukuba awusebenzi negama lakho, unike umxhasi wakho iphepha lemibuzo okanye ingxelo emfutshane ukuze yena ngokwakhe achaze amagama enkampani yakhe.
Umzekelo, ukuba uphuhlisa i-graphic identity yehotele, unokubeka amagama anje: ukuphumla, indalo, ubunewunewu, itropiki, ulwandle, ukhenketho, njl njl.
Nje ukuba ukhethe, khangela kwi Twilley konke iimbekiselo ezibonakalayo ezihambelana namagama akho: Iifoto, imibala, imizekeliso, iipateni, uburhabaxa, njl. Zigcine ebhodini okanye kwifolda kwikhompyuter yakho, kwaye uyakuqonda ukuba loo mifanekiso banezikimu zemibala eziphambili kwaye ziyafana omnye komnye.
Unako yenza iMoodboard ukukunceda ukuba ube nomfanekiso ngqondweni osele ungowona uqokelelweyo. Nali inqaku lokuba ufunde indlela yokwenza iMoodboard.
Ngokwenza oku, uya kuqaphela ukuba kukho imibala ehambisa ngcono ubuntu bebrand yakho. Kuzo zonke, uya kuthi khetha umbala obalaseleyo ejikeleze apho bonke abanye baya kukhethwa.
Zama oko umbala wakho obalaseleyo uyabetha kwaye ngokukhethekileyo womelele (ubuncinci xa kuthelekiswa nolunye ukhetho lwakho). Khumbula ukuba lo mbala uya kuba ngulowo umele uphawu lwakho, ke kufanele ukuba ukhunjulwe kwaye abathengi kufuneka bakwazi ukudibanisa ngokulula nenkampani.
Kulo mbala ubalaseleyo kufuneka yongeza umbala omnye ehambelana. Ingahamba ngokuchaseneyo okanye ngendlela encedisayo kunye neyokuqala, kwaye ezi ziya kuba zezona ziphambili kwiphalethi yakho.
Imibala ebalaseleyo ekhethwe kwiphalethi yombala.
Ngoku kufuneka ukhethe okunye kwe imibala yesibini eziza kuxhasa iinqununu. Kukhethwa ukuba babe njalo ukukhanya, ukungabonakali ngakumbi kwaye kungatsali ingqalelo ngaphezulu kwezinye. Ukufezekisa indibaniselwano ehambelanayo phakathi kwabongamileyo kunye nabaxhasi, ungasebenzisa izixhobo ezithile ukukunceda ukudibanisa imibala.
Esi sixhobo simahla kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa. Kuyanceda ukuba yenza imibala yemibala evela kumbala owukhethileyo kwisangqa se-chromatic esivela apho. Nje ukuba ukhethe, inkqubo iya kukunika zonke iifayile ze- indibaniselwano enokubakho ngokwendidi: IiAnalogs, ezincedisayo, ezithathu, iikhompawundi, iithowuni kunye nesiko.
Kwakhona, ukuba ungena kwi Ilifu lokudala, ungagcina izikimu zombala owuthandileyo kwaye uzisebenzisele umsebenzi wexesha elizayo.
Iphalethi yombala eveliswe ngombala weAdobe
Ngokungafaniyo nombala weAdobe, esi sixhobo ukuvelisa ngokungathandabuzekiyo imibala yemibala Ngokucinezela nje indawo yesithuba kwikhibhodi. Iluncedo kakhulu ukuba ufuna isisombululo esikhawulezayo nesichanekileyo. Ikwavumela nawe khangela umbala othile ngokuchwetheza ixabiso lekhowudi kunye nokuvelisa iiphalethi zazo.
Iphalethi yombala eveliswe kwiCoolors.co Nje ukuba uchaze imibala yakho emibini okanye emithathu, Sele unombala wephalethi wophawu lwakho ulungile!
Imibala yesibini yemibala yemibala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyikhetha njani iphalethi yombala efanelekileyo yohlobo lwakho
Ukupakishwa kweHeineken entsha ukubeka inqaku kwezona zinto zibalulekileyo